Love Archives - Page2of5- Tameelay
ရှငျကခဈြသလောကျ ရှငျ့ကိုပွနျမခဈြနိုငျတဲ့သူတှနေဲ့ဆုံရတဲ့အခါ…. ရှငျ့ကိုအရမျးခဈြခဲ့တဲ့ကြှနျမကိုသတိရပေးပါ။
July 3, 2020 by Tameelay
“သတိရပေးပါ” ရှငျကခဈြသလောကျ ရှငျ့ကိုပွနျမခဈြနိုငျတဲ့သူတှနေဲ့ဆုံရတဲ့အခါ….ရှငျ့ကိုအရမျးခဈြခဲ့တဲ့ကြှနျမကိုသတိရပေးပါ။ ရှငျကဂရုစိုကျသလောကျ ရှငျ့ကိုပွနျအရေးမစိုကျတဲ့သူတှနေဲ့ကွုံရတဲ့အခါ…ရှငျ့အတှကျဆို အမွဲပူပနျပေးတတျတဲ့ကြှနျမကိုသတိရပေးပါ။ရှငျကတနျဖိုးထားသလောကျ ရှငျ့ကိုပွနျအလေးမထားတဲ့သူတှနေဲ့ဆကျဆံရတဲ့အခါ…ရှငျနဲ့ပတျသကျသမြှအသေးစိတျလေးကအစမွတျနိုးတတျတဲ့ကြှနျမကိုသတိရပေးပါ။ ရှငျကပေးဆပျသလောကျ ရှငျ့ကိုပွနျမသိတတျတဲ့သူတှနေဲ့ရငျဆိုငျရတဲ့အခါ…ရှငျ့ဘကျကိုအမွဲဦးစားပေးခဲ့တဲ့ကြှနျမကိုသတိရပေးပါ။ရှငျကကောငျးသလောကျ ရှငျ့ကိုပွနျမကောငျးနိုငျတဲ့သူတှနေဲ့တှရေ့တဲ့အခါ….ရှငျလုပျသမြှဘယျတုနျးကမှအပွဈမမွငျခဲ့ဖူးတဲ့ကြှနျမကို သတိရပေးပါ။ မနောဖွူ သတိရပေးပါ” ရှင်ကချစ်သလောက် ရှင့်ကိုပြန်မချစ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆုံရတဲ့အခါ….ရှင့်ကိုအရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်မကိုသတိရပေးပါ။ ရှင်ကဂရုစိုက်သလောက် ရှင့်ကိုပြန်အရေးမစိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ…ရှင့်အတွက်ဆို အမြဲပူပန်ပေးတတ်တဲ့ကျွန်မကိုသတိရပေးပါ။ရှင်ကတန်ဖိုးထားသလောက် ရှင့်ကိုပြန်အလေးမထားတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါ…ရှင်နဲ့ပတ်သက်သမျှအသေးစိတ်လေးကအစမြတ်နိုးတတ်တဲ့ကျွန်မကိုသတိရပေးပါ။ ရှင်ကပေးဆပ်သလောက် ရှင့်ကိုပြန်မသိတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ…ရှင့်ဘက်ကိုအမြဲဦးစားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်မကိုသတိရပေးပါ။ရှင်ကကောင်းသလောက် ရှင့်ကိုပြန်မကောင်းနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါ….ရှင်လုပ်သမျှဘယ်တုန်းကမှအပြစ်မမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ကျွန်မကို သတိရပေးပါ။ မနောဖြူ
Categories Love Tags 03
ဘယျတော့မှမခှဲဘူးနျော မယုံနဲ့ အဲ့ဒါပုံပွငျတှပွေောတာ
ဘယျတော့မှမခှဲဘူးနျော မယုံနဲ့ အဲ့ဒါပုံပွငျတှပွေောတာ အရမျးခဈြတယျ မယုံနဲ့ အဲ့ဒါဂငျြးထညျ့တာ နောကျတဈယောကျဆိုတာမရှိစရေဘူး မယုံနဲ့ အဲ့ဒါဗရမျးပတာတှပွေောတာ သစ်စာရှိရှိခဈြနပေါ့မယျ မယုံနဲ့ အဲ့ဒါ နောကျတဈယောကျမတှသေ့ေးလို့ပွောတာ နငျကလှဲရငျဘယျသူ့ကိုမှမခဈြတော့ဘူး မယုံနဲ့ အဲ့ဒါ ကမ်ဘာမှာအကွီးမားဆုံးနဲ့အလှဆုံးမုသား လူတှကေလဲခကျသားပွောတဲ့သူကပွောသလို ယုံတဲ့သူကလဲယုံနကွေတုနျး သိုးဖွူ ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးနော် မယုံနဲ့ အဲ့ဒါပုံပြင်တွေပြောတာ အရမ်းချစ်တယ် မယုံနဲ့ အဲ့ဒါဂျင်းထည့်တာ နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာမရှိစေရဘူး မယုံနဲ့ အဲ့ဒါဗရမ်းပတာတွေပြောတာ သစ္စာရှိရှိချစ်နေပါ့မယ် မယုံနဲ့ အဲ့ဒါ နောက်တစ်ယောက်မတွေ့သေးလို့ပြောတာ နင်ကလွဲရင်ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်တော့ဘူး မယုံနဲ့ အဲ့ဒါ ကမ္ဘာမှာအကြီးမားဆုံးနဲ့အလှဆုံးမုသား လူတွေကလဲခက်သားပြောတဲ့သူကပြောသလို ယုံတဲ့သူကလဲယုံနေကြတုန်း သိုးဖြူ
Categories Love Tags 02
1. နားလညျမှု ယုံကွညျမှု သစ်စာရှိမှုတှဟော အဓိကအခကျြပေါ့။ 2. လြှို့ဝှကျခကျြတှေ မထားပဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုပါ။ 3. အခကျအခဲတှကေို အတူဖွရှေငျးပါ။ 4. မအားဘူးလို့ပါဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှနေဲ့ ခဏခဏပဈမထားပါနဲ့။ 5. လူအမြားကွား မအျောပါနဲ့။ 6. အမှတျတရနရေ့ကျတှကေို အမွဲအမှတျရပါစေ။ 7. အခြိနျရရငျရသလို ပြျောစရာတှကေို ဖနျတီးပါ။ 8. ဟာသတှလေေးနှောလို့ ရယျစရာလေးတှပွေောပေးပါ။ 9. အားရငျအားသလို အမွဲအဆကျအသှယျလုပျပါ။ 10. မိမိ အခဈြတှကေို ခဈြသူက သိသာမွငျသာအောငျပွပါ။ 11. ရငျခုနျသံတှေ အမွဲနှေးထှေးနစေဖေို့ အနမျးလေးတှပေေးပါ။ 11. ဖုနျးပွောပွီးတဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ Message တှပေို့လို့ပဲဖွဈဖွဈ နောကျဆုံး ” အရမျးခဈြတယျနျော ” ဆိုတဲ့စကား ပွောပေးဖို့ဝနျမလေးပါနဲ့။ မယျမငျးဘုံ 1. နားလည်မှု ယုံကြည်မှု … Read more
Categories General Knowledge, Love Tags 24
အချစ်ရေးမှာ အစစအရာရာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှမျှတတဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်ကပဲအမြဲပေးဆပ်နေရတာက ဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်တဲ့အရာပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အရာရာအလျှော့ပေးပြီး ပေးဆပ်နေလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ်ပိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချစ်ရေးမှာ တစ်ဖက်သတ်တည်းအမြဲပေးဆပ်လေ အဲ့ဒီအချစ်ရးက ပိုဆိုးလေဖြစ်လို့ပါ။ အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဒီလိုရှိပါတယ်။ (၁) နားလည်ပေးလွန်းတဲ့အခါ တာဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ် ကိုယ်ကချစ်လို့ အလိုက်သိနားလည်ပေးတာက တစ်ခါကနေနှစ်ခါ၊သုံးခါ စသဖြင့် များလာတဲ့အခါ ကိုယ်နားလည်ပေးတာက အသိအမှတ်ပြုမခံရတော့ဘဲ ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆက်တိုက်နားလည်သည်းခံလာပြီး တစ်ခါလောက် ပေါက်ကွဲလိုက်မိရင်ကို သူ့အမှားမဟုတ်တော့ဘဲ ကိုယ့်အမှားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် ချစ်လို့ဆိုပြီး နားလည်ပေးလွန်းတာက နှစ်ယောက်ကြားက စိတ်ခံစားချက်တွေကို အဆင်မပြေဖြစ်စေပါတယ်။ (၂) ပေးဆပ်လွန်းတာက တန်ဖိုးမဲ့စေတယ် ကိုယ့်ဘက်က အမြဲလိုလို အရာရာကိုအလိုက်သိပြီးပေးဆပ်လွန်းတာက ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတဖြည်းဖြည်းနည်းလာစေပြီး နောက်ဆုံးမှာတန်ဖိုးမဲ့သွားစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ပေးဆပ်မှုတန်ဖိုးကိုနားမလည်တဲ့သူကို ပေးဆပ်ပြီးမနေသင့်ပါဘူး။ (၃) နွေးထွေးလုံခြုံမှုကိုမခံစားရဘူး … Read more
Categories Love Tags 19, pp
လောကကြီးမှာ အချစ်စစ်မှန်ရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေချည်းပဲလည်းမဟုတ်ဘူး၊ အဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်း မလွဲမသွေကြုံရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အရာအားလုံး ပြီးပြည့်စုံတာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အချစ်ကြောင့် ဘဝကပျော်ရွှင်မှုတွေပိုများလာတာမျိုးပဲ ပိုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ်တာ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာတွေပိုများနေရင် အဲ့ဒါက အချစ်စစ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ (၁) အရာရာ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး ချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကတဖွဖွပြောပေမယ့် လက်တွေ့မှာကိုယ့်အတွက်မစဉ်းစားပေးတာ၊ ကိုယ့်အတွက်မကြည့်တာ၊ တစ်ဖက်ကအမြဲသည်းခံပြီး၊ တစ်ဖက်ကအမြဲအနိုင်ယူနေတာမျိုးကို စစ်မှန်တဲ့အချစ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အချစ်စစ်ဆိုတာက နှစ်ဖက်မျှတမှုရှိပါတယ်။ (၂) အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာ အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားပေးဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်ကြည့်ပေးဖို့အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာမျိုး၊ မလုံခြုံတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေတာမျိုးက အချစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်စစ်က ဂရုစိုက်ဖို့တောင်းဆိုစရာမလို၊ အောက်ကျို့နေစရာမလိုဘဲ၊ လုံခြုံတဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတာမျိုးပါ။ (၃) အမြဲတမ်းငိုကြွေးနေရတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး အချစ်ကတခါတရံသင့်ကိုဝမ်းနည်းစေပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ ဝမ်းနည်းစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ရတာထက် ဝမ်းနည်းရတာကပိုများနေတာ အချစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်းဝမ်းနည်းစေတဲ့သူမျိုးကို ချစ်မိနေတယ်ဆိုရင်တော့ လက်တွဲဖြုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ (၄) သူကိုယ့်အနားနေထွက်မသွားဖို့ဆွဲထားနေရတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုထားမသွားဖို့၊ သူကိုယ့်အနားကထွက်မသွားဖို့ … Read more
Categories Love Tags 16, pp